मिथिलाञ्चलमा झिझिया नृत्यको रौनक - RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal
पैसा नदिए फेशबुकबाट अश्लिल तस्विर सार्वजनिक गरिदिन्छु भन्दै धम्कि दिने पक्राउ
काठमाडौं । फेसबुक एकाउन्ट ह्याक गरी ३० हजार रुपैयाँ ठगी गरेको अभियोगमा २ जनालाई आइतबार प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेहरुमा सप्तरी सितापुर...
त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको भवन शिलान्यास
दिनेश थापा - December 1, 2020 0
सिन्धुपाल्चोक । गाउँपालिकाको आफ्नै भवन नहुदा दैनिक काम गर्न समस्या भइरहेको सिन्धुपाल्चोकको त्रिपुरासुन्दरी गाँउपालिकामा अबको केही वर्ष भित्र आफ्नै सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण हुने...
सुजीतकुमार झा - December 1, 2020 0
अस्पताल नपुग्दै एम्बुलेन्स दुर्घटनाले लियो बिरामीको ज्यान
एम के माझी - December 1, 2020 0
सप्तरी । उपचारका लागि बिराटनगर जाँदै गरेका एक बिरामी चढेको एम्बुलेन्स दुर्घटनामा पर्दा उनको बाटोमै मृत्यु भएको छ । दुर्घटनामा मृतक परिवारका तीन जना...
१३०४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, २१ जनाको मृत्यु
काठमाडौँ । पछिल्लो २४ घण्टामा मुलुकभर एक हजार ३०४ जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । यसैगरी गत २४ घण्टामा २ हजार ७३...
नेकपा सचिवालय बैठक जारी
रासस - December 1, 2020 0
काठमाडौँ । शीर्ष तहमा देखिएको विवादका विषयमा छलफल गर्न सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जारी छ । यसअघि...
नेकपा सचिवालय बैठक बालुवाटारमा सुरू
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सुरु भएको छ । पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बस्ने भनिए पनि असुरक्षाको कारण...
नेकपा सचिवालय बैठक आज : दुवै प्रस्तावलाई एकरूपता दिलाउने प्रयाश
सविन शर्मा - December 1, 2020 0
काठमाडौं । चुनावी गठबन्धन गर्दै पार्टी एकतासम्मको तीन वर्षमा अनेकौं उतारचढाव, आरोप–प्रत्यारोप र मनमुटाव भए पनि नेकपामा भिन्दाभिन्दै राजनीतिक प्रस्ताव नलेखेका अध्यक्षद्वयले पहिलोपटक भिन्नाभिन्नै...
नेकपा कुनै पनि हालतमा फुट्दैन : झलनाथ खनाल
भगीरथ भण्डारी - November 30, 2020 0
इलाम । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता झलनाथ खनालले नेकपा कुनैपनि हालतमा नफूट्नै बताएका छन् । इलामको सूर्योदय नगरपालिकामा निर्माण...
मंसिर १८ गते माङसेबुङमा सार्वजनिक विदा
भगीरथ भण्डारी - December 1, 2020 0
इलाम । इलामको माङसेबुङ गाउँपालिकाले किरात धर्मगुरु आत्मानन्द लिङदेनको जन्मोत्सवमा सार्वजनिक विदा दिएको छ । गाउँकार्यपालिकाको बैठकको निर्णय अनुसार मंसिर १८ गते धर्मगुरु आत्मानन्दको...
स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमा, सरकार मौन
प्रशान्त वली - December 1, 2020 0
काठमाडौं । स्वास्थ्य सम्वद्ध २३ संगठनहरु स्वास्थ्यकर्मीका माग सम्वोधन गर्न सरकार गम्भिर नभए निर्णायक आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन् । अबको दुई सातामा माग...
बीर अस्पताल अगाडीको ढलपोखरीले महानगरको इज्जत जाँदैन ? (फोटोफिचर)
द्धारिका काफ्ले - November 30, 2020 0
काठमाडौं । नेपालकै जेठो अस्पताल बीर अस्पतालको मुख्य गेटवाहिर सडकमा पानीको आहाल (ढलपोखरी) जमेको एक महिना पुग्न लाग्यो । सडकमा फोहोरको पोखरी वनेको दृष्य सामान्य...
मौलापुरसहित रौतहटमा एकैसाथ ५ अस्पताल शिलान्यास
गौर । रौतहटको विभिन्न स्थानीय तहहरूमा एकैसाथ ५ वटा अस्पतालको शिलान्यास भएको छ । छनोट भएका ५, १० र १५ शय्याको आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि...
वीरका कर्मचारी आन्दोलनमा
प्रशान्त वली - November 30, 2020 0
काठमाडौं । वीर अस्पताल प्रशासनले तलबलगायत सेवा सुविधा नदिएको भन्दै अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरू ४२ दिनदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । संघर्ष समिति नै गठन गरेर...
भारतमा कोरोना संक्रमणबाट २४ घण्टामा ५८५ जनाको मृत्यु
रासस - November 19, 2020 0
नयाँदिल्ली । भारतमा केही दिनयता कोरोनाभाइरसबाट संक्रमितको संख्यामा केही कमी आएको देखिए पनि पछिल्लो २४ घण्टामा फेरि संक्रमितको संख्या बढेर ४५ हजार ५७६ पुगेको...
बैध भोट मात्रै गनिए आफूले जित्ने ट्रम्पको दावी, अदालतद्वारा उजुरी खारेज
एजेन्सी - November 6, 2020 0
वासिङटन । अमेरिकाको राष्ट्रपति चयनका लागि भएको निर्वाचनमा मतगणनाको विषयलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको छ । राष्ट्रपतिका उम्मेदवार समेत रहनु भएका वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले...
चेल्सी र टोटनह्याम बराबरी, युनाईटेडको जीत
एजेन्सी - November 30, 2020 0
लन्डन । इग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा शीर्ष स्थानको टोटनह्याम हट्सपर र तेस्रो स्थानको चेल्सीले गोलरहित बराबरी खेलेका छन् । गएराति चेल्सीको मैदानमा भएको लण्डन...
साग आयोजना र पूर्वधारमा चार अर्बभन्दा बढी खर्च
काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले झन्डै एक वर्षपछि १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग)को खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको छ । राखेप सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवालले...
सुवासलाई एसकेआईएफको सम्मान
काठमाडौं । नेपाल सोतोकान कराते संघ (एसकेआईएफ)ले आफ्ना पदक विजेता खेलाडी सुवास घतानेलाई आइतबार नगदसहित सम्मान गरेको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को अवधिमा भएका राष्ट्रिय...
र्मैलो शनिबार दिउँसो दुई बेज्दै छ । स्थान : महत गाउँ, लेले (ललितपुर) । एकनास लतमन्न तर हल्का नागबेली पक्की सकड परसम्मै फैलिएको छ । ‘बुबा, यहाँबाट...
Home प्रमुख मिथिलाञ्चलमा झिझिया नृत्यको रौनक
By सुजीतकुमार झा
जनकपुरधाम । मिथिलाञ्चलका गाउँगाउँमा दसैंमा झिझिया नाचिन्छ । पूर्ण तान्त्रिक विधिअनुसार गरिने यो नृत्यको मिथिलामा आफ्नै महत्व छ । दसैंमा देवी स्तुतिका रूपमा झिझिया नृत्य गरिन्छ । बोक्सीबाट आफ्ना सन्तान र समाजको सुरक्षाका लागि यो नृत्य गर्ने गरिएको जनविश्वास छ ।
यसको बनावट र स्वरूपभित्र जादु, टुनामुना, बोक्सी आदिको प्रभावलाई कम गर्न अनुष्ठान प्रारम्भ गरिएको मानिन्छ । बलिरहेको दियो तथा असंख्य प्वाल पारिएको घैँटो त्यसकै नमुना हो । टाउकामा राखेर नृत्य गर्ने महिलाद्वारा टाउकोको दायाँबायाँ हल्लाइरहने प्रवृतिले यसमा निहित विशेष अर्थलाई संकेत गर्दछ । महिलाको टाउकामा राखिएको घैँटोको प्वाल कुनै बोक्सीले गन्न सफल भयो भने नाच्ने महिला ठहरै हुने जनविश्वास छ । त्यसकारण सो घैँटो टाउकामा राखी जादु, टुनामुनाबाट मुक्ति पाउनका लागि परम्परागत रूपमै नृत्य गरिने गरिन्छ ।
विशेष सुरताल र झिझियाको गीतमा झुमी टाउकोमा घैँटो राख्ने महिला चारैतिर फन्को मार्दै नृत्य गर्दै जाँदा अद्भुत वातावरणको निर्माण हुन्छ । नृत्यसँगै गाइने सो गीतमा बोक्सीलाई गाली गरिनुका साथै धम्कीसमेत दिइन्छ । बोक्सीको अनैतिक शक्तिको प्रभाव सो गालीले कम हुने गरेको तथा सन्ततिहरूको सुरक्षा हुने जनविश्वास रहेको संस्कृतिकविद् डा. रेवतीरमण लाल बताउँछन् ।
घैँटोमाथि बलिरहेको आगोको डल्लो लिएर नृत्य गर्नु आफैंमा साहस र कलाको अलौकिक प्रदर्शन नै झिझिया नृत्य हो । समाज रूपान्तरणसँगै लोकनृत्यहरू गायब हुन थालेका छन्
झिझिया लोकनृत्य धनुषालगायत महोत्तरी, सिरहा, सर्लाही, बारा, पर्सासहितका जिल्लामा नाचिन्छ । त्यस्तै, भारतीय मिथिला क्षेत्रमा पनि प्रस्तुत गरिन्छ । झिझिया कुनै जाति विशेषको नभई सम्पूर्ण मैथिली समाजको लोकनृत्य हो ।
घैँटोमाथि बलिरहेको आगोको डल्लो लिएर नृत्य गर्नु आफैंमा साहस र कलाको अलौकिक प्रदर्शन नै झिझिया नृत्य हो । समाज रूपान्तरणसँगै लोकनृत्यहरू गायब हुन थालेका छन् । तैपनि गाउँघर तथा सहर बजारमा यसलाई जीवित राख्न भए पनि बर्सेनि झिझिया नृत्य आयोजना गरिन्छ ।
सातौं वा आठौं शताब्दीतिर बोक्सीविरुद्ध प्रतिकार गर्ने उद्देश्यले एउटा अनौठो नृत्यको प्रदर्शन गर्दै झिझिया नृत्यको सुरुवात गरिएको इतिहासकारहरू बताउँछन् । गाउँघरमा ती झिझिया नृत्यले निरन्तरता पाइरहँदा सहर बजारसमेत झिझिया नृत्यबाट अछूतो रहेन । जनकपुरमा अहिले हरेक रात समूह समूहमा महिला झिझिया नृत्य गरिरहेको सहजै देख्न सकिन्छ ।
यसको एउटा उद्देश्य दसैंको समयमा देवी दुर्गालाई रिझाउनु रहेको छ । झिझिया नृत्य गर्दै गाइने गीतहरूमा भगवती दुर्गाको स्तुति गरिएका अत्यन्त मोहक गीतहरू पनि गाइन्छन् । त्यसमा प्रत्येक दसैंमा आफ्ना खास सवारीसाथ आउने भगवतीको शृृंगार डोलीमा सवारी र कामख्याको गन्तव्यको सजीव चित्रण गरिएका गीतहरू गाइन्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस सिन्धुपाल्चोकको विपदग्रस्त क्षेत्रको भौगर्भिक अध्ययन
झिझिया नृत्य प्रारम्भ गर्न पूर्वतयारी गर्नुपर्छ । एउटा वा दुइटा स्वच्छ घैंटो किनेर त्यसलाई सफासुग्घर गरी घैंटोभरि प्वाल बनाइन्छ । घैंटोको मुखमा राखिएको ढकनामा आगो सल्काइन्छ । टाउकामा राखेर नृत्यका लागि झिझिया तयार हुन्छ । तर, टाउकामा राखी नृत्य गर्नुपूर्व झिझियालाई कुनै गुणी ओझाबाट मन्त्रद्वारा सिद्ध पारिन्छ
सभ्य गुरुक बन्दे पाउँ । बजर केवाडी ।
बजर बान्हो दशो दुआरी ।
मटिया बान्हो, मसान बान्हो, टोना बान्हो, टापर बान्हो ।।
यसरी मन्त्रीबाट सिद्ध भएपछि ५ देखि १५ जनासम्मका महिला टोलीमध्ये एक वा दुई महिला टाउकामा आगो बलिरहेको घैंटो राखेर हातको सहारा लिई नाच्दैं ब्रह्मस्थानमा पुगेर सबभन्दा पहिले पूजा गरेर नृत्य गर्ने गर्दछन् । ब्रह्मस्थानमा नृत्य गरेलगत्तै झिझिया औपचारिक रूपमा सुरु हुन्छ । त्यसपछि घर घरमा गएर नृत्य देखाउने परम्परा छ । प्रत्येक घरबाट पूर्णाहुतिका लागि अन्न÷रुपैयाँ चन्दा माग्ने चलन छ । त्यही मागिएको रकम जोडेर विजयादशमीको दिन पूजा पाठ, भोज र प्रसाद वितरण गरिन्छ र झिझिया लोकनृत्य विसर्जन हुन्छ ।
समाजमा प्रचलित यो झिझिया गीतले सामाजिक अन्धविश्वासलाई प्रस्ट्याउँछ । यद्यपि, गाउँघरका महिलाले आफ्नो पारिवारिक शान्तिको कामना गर्दै दसैंताका झिझिया नाच नाच्ने परम्परा रहेको छ । परम्परागत लोकविश्वासमा आधारित कैयौं यस्ता लोकगीतहरू लोपोन्मुख अवस्थामा छन् । यसकारण, सांस्कृतिक दृष्टिले जगेर्ना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
पत्रकार एवं शेभ हिस्टोरिकल जनकपुरधामका अध्यक्ष एवं सांसद रामअशिष यादवले लोक संस्कृतिको जीवन्त प्रस्तुति झिझिया नृत्यबाट अन्धविश्वास उखेल्न गाह्रो भएको बताउँछन् । उनले कलालाइ रूपान्तरण गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
झिझिया नृत्यमा प्रदर्शन गरिने कलालाइ रूपान्तरित समाजमा परिष्कृत गर्दै अगाडि बढाउँदा झिझिया नृत्य अझै लोकप्रिय र समाजले त्यसबाट केही लिन सक्ने मिथिला नाट्य कला परिषद्का पूर्वअध्यक्ष मदन ठाकुरले बताए ।
झिझियालाई बचाउने प्रयास
झिझियालाई बचाउन मिथिलाञ्चलमा विशेष प्रयास सुरु भएको छ । मिथिला नाट्य कला परिषद्का अध्यक्ष परमेश झाले मिनापले नेपाल भारतको विभिन्न ठाउँमा गरिने सांस्कृतिक कार्यक्रममा झिझियालाई विशेष प्रस्तुतिका रूपमा लिने गरेको छ । मिनापले केही वर्षयता झिझियाको ५ सयभन्दा बढी नृत्य प्रदर्शन गरेको छ । जनकपुरकै राजदेवी युवा क्लबले दसैंको बेला झिझिया नृत्य प्रतियोगिता आयोजना गर्दै आएको छ । दसैंकै बेला जनकपुरका राम युवा कमिटी, महावीर युवा कमिटी र रामानन्द युवा क्लबको भजन सन्ध्यामा झिझियाको विशेष प्रस्तुति देखाइन्छ । सिरहा र सप्तरीमा समेत प्रत्येक वर्ष झिझिया प्रतियोगिताको आयोजना हुने गरेको राजविराजका वरिष्ठ पत्रकार शिवहरि भट्टराईले बताए ।
राजधानी समाचारदाता - December 1, 2020
एम के माझी - December 1, 2020
बेल्जियम नागरिकले झारल र नाउरको शिकार गरे
बागलुङ । ढोरपाटन शिकार आरक्ष बागलुङमा यस वर्षको पहिलो शिकार सिजनमा एक नाउर र एक झारलको शिकार गरिएको छ । नेपाल ट्राभल्स एण्ड एक्पिडेसन कम्पनीमार्फत...
नेपाल–भारत उडान सञ्चालन हुने
Breaking News सिबी अधिकारी - December 1, 2020
काठमाडौँ । कोभिड–१९ महामारीका कारण उडान प्रतिबन्ध गरिएको नेपाल–भारत उडान यथाशीघ्र सञ्चालनमा आउने भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले अर्को साताबाट...
उखुकाे समर्थन मुल्य ६२० रुपैयाँ नबनाए आन्दोलन गर्ने उखु किसानको चेतावनी
Breaking News कौशिला कुँवर - December 1, 2020
काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रलायले चालू आर्थिक वर्षको उखुको समर्थन मूल्य ५४४ रुपैयाँ सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ । उखुको नगद अनुदान प्रतिक्विटल...
Breaking News राजधानी समाचारदाता - December 1, 2020
राजनीति रासस - December 1, 2020
सुनको मूल्य ५०० ले बढ्यो
अर्थ रासस - December 1, 2020
काठमाडौँ । स्थानीय बजारमा आज पहेँलो धातुको मूल्य प्रतितोला रु ५०० ले वृद्धि भएको छ । सोमबार प्रतितोला रु ९० हजारमा कारोवार भएको छापावाला...
रेमिट्यान्स आयातमा वृद्धिः चालू खाता र शोधनान्तर स्थिति बचतमा
Exclusive पूर्णभक्त दुवाल - November 26, 2020
काठमाडौं । चालूआर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा रेमिट्यान्समा १२.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार तीन महिनामा २ खर्ब ५८ अर्ब ८६...
इलाम फाकफोकथुममा मंसिर १४ बाट विद्यालय खुल्ने
प्रदेश १ भगीरथ भण्डारी - November 27, 2020
इलाम । इलामको फाकफोकथुम गाउँपालिकाले मंसिर १४ गतेबाट विद्यालय सञ्चालन गर्ने भएको छ । कोरोना संक्रमणको कारण गत चैत्र ११ गतेबाट बन्द रहेका विद्यालय...
अलविदा ! फुटबल लिजेन्ट म्याराडोना
Editor-Picks एजेन्सी - November 26, 2020
व्यूनर्सआयर्स । अर्जेन्टिनी फुटबलर डिएगो म्याराडोनाको हिजो बुधबार हृदयघातबाट निधन भयो । दुई साताअघि मात्रै राजधानी ब्युनर्स आयर्स नजिकको एक अस्पतालमा उनको मस्तिष्कको शल्यक्रिया...
Breaking News रासस - November 26, 2020
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार सबैको संयोजन, सहभागिता र सहकार्यबाट सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइनुपर्नेमा जोड दिएका...
भर्खरै प्रशान्त वली - November 30, 2020
सलह किराबारे जानकारी दिन कृषिमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै, नआत्तिन आग्रह
राजधानी समाचारदाता - June 28, 2020
काठमाडौं । नेपालमा देखिएको सलह किराको बथान सानो रहेको र यसले धेरै क्षति नपुर्याएको भन्दै कृषि मन्त्रालयले किसानहरुलाई नआत्तिन भनेको छ । कृषिमन्त्री घनश्याम भुषालले...
विभिन्न देशमा अलपत्र परेका नेपालीको नियमित उद्धार
रासस - June 27, 2020
काठमाडौँ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एक सातादेखि नियमितरुपमा अन्तर्राष्ट्रिय चार्टर्ड उडान भइरहेको छ । ती उडानबाट कोभिड–१९ महामारीबाट विभिन्न देशमा अलपत्र परेका नेपाली धमाधम...
स्मृतिमा श्रीमान् थुलुङ
Not-to-be-missed राजधानी समाचारदाता - July 24, 2020
पोखरा । गायक, संगीतकार एवं गीतकार श्रीमान् थुलुङको स्मृतिमा प्रकाशित स्मृति ग्रन्थ पोखरामा एक समारोहबीच विमोचन गरिएको छ । नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा...
नेताहरू कहाँ चुके ?
बिचार विनन्द वैद्य - August 27, 2020
२०६३ साल ५ मंसिर नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा (माओवादी)बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । माओवादीतर्फबाट अध्यक्ष प्रचण्ड र नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री...
नावरलाई खुसी पार्न नयाँ र प्रविधियुक्त घर
प्रदेश सविन शर्मा - February 15, 2020
काठमाडौं । ललितपुरको जावलाखेलमा रहेको सदर चिडियाखाले जीवजनावर राख्न नयाँ र आधुनिक घर निर्माण...
प्रदेश १ रासस - November 1, 2020
कोरोना भाइरसको प्रभाव औषधिमा, भारतले २६ प्रकारका औषधि आयात रोक्यो
Exclusive प्रशान्त वली - March 6, 2020
स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा सरकारलाई धोका
भर्खरै प्रशान्त वली - May 5, 2020
काठमाडौं । स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा केही व्यवसायीले सरकारलाई ढाँटेको पाइएको छ । ओम्नी ग्रुपसँग मेडिकल सामान खरिद सम्झौता गरेको स्वास्थ्य सेवा विभागले टेन्डर...
प्रदेश २ एम के माझी - December 1, 2020
प्रमुख राजधानी समाचारदाता - December 1, 2020
प्रदेश राजधानी समाचारदाता - December 1, 2020
प्रदेश दिनेश थापा - December 1, 2020
रोल्पाको लाँकुरीको शवस्टेशन चार्ज
अर्थ राजधानी समाचारदाता - December 1, 2020
रोल्पा । रोल्पाको लाँकुरीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ३३÷११ केभी शवस्टेशन चार्ज भएको छ । ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले प्राधिकरणको पूर्ण स्वामित्वमा...
बलात्कार गरे, एकतोला सुन दिने तमासुक बनाए अनि धम्क्याए
Editor-Picks सिपी लाेहिया - November 27, 2020
बैतडी । बैतडीको सिगासमा ६ महिना अघि एकजना युवतिलाई स्थानिय युवाले बलत्कार गरे । किसोरीले घरका मान्छेलाई आफु बलात्कृत भएको जानकारी गराइन् । घटना गाउँको...
बलात्कारपछि हत्या : तनाव बढ्दै गएपछि चार बुँदे सहमति
Editor-Picks सुजीतकुमार झा - November 26, 2020
जनकपुरधाम । महोत्तरीको बर्दिबासमा ६ वर्षीया बालिकाको हत्या भएको घटनाले उग्र रूप लिएको छ । मंगलबार प्रहरीको गोली लागेर गम्भीर घाइते भएका बर्दिवास–१ का...
प्रमुख सुभाष साह - November 27, 2020
काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्रको विवाद चर्किँदै गइरहेका बेला अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालका बीचमा संवाद टुटेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस बेल्जियम नागरिकले झारल र नाउरको शिकार गरे
१३८० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, १९ जनाको मृत्यु
Breaking News राजधानी समाचारदाता - November 28, 2020
काठमाडौँ । देशभर आज थप १ हजार ३८० जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । योसँगै नेपालमा कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमितको सङ्ख्या २ लाख...
‘कृष्ण लिला’ इलाममा सुटिङ हुँदै (फोटोफिचर)
पूजा चँदारा - November 27, 2020
नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीशकै अलमल
निराजन पौडेल - November 26, 2020
असाधारण खेलाडी, विवादित जीवनशैली
एजेन्सी - November 27, 2020
१२५५ जनामा कोरोना पुष्टि, १४०४ जना संक्रमणमुक्त
घरको इज्जत फाली भन्दै छोरीको हत्या गर्ने बाबु आमा पक्राउ
Editor-Picks रमेश तिमलसिना - November 30, 2020
रौतहट । छोरीको हत्या गरेको आरोपमा बाबु आमा पक्राउ परेका छन् । गत कात्तिक २६ गते जिल्लाको माधवनारायण नगरपालिका–७ लौकाहा टोलमा १७ वर्षीया अमृता...
विद्यालय कतै खुल्यो, कतै खुलेको भोलिपल्टै बन्द
Editor-Picks एम के माझी - November 30, 2020
सप्तरी । लामो समय पश्चात् खुलेका सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिकाका केही विद्यालय संचालनमा आएको भोलिपल्टै पुनः बन्द भएका छन् । कोरोनाको जोखिम कायमै रहेको निष्कर्ष...
वरिष्ठ उपाध्यक्षमा विजयी ढकालको जीवन संघर्षको कथा
Editor-Picks मधुजंग पाण्डे - November 30, 2020
काठमाडौं । निजी क्षेत्रको संघीय प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा विजयी चन्द्रप्रसाद ढकालले जीवनमा निकै संघर्ष गर्नुप¥यो । बाग्लुङको बलेवा अमलाचौरमा...
यो पनि पढ्नुहोस मंसिर १८ गते माङसेबुङमा सार्वजनिक विदा